Usebenzisa njani ubeko lwebhodi yezitshixo ye-iPhone yamanye amazwe
I-Apple iyaqhubeka nokwandisa ukufikelela kwe-iPhone kwihlabathi liphela ngokubonelela ngezakhiwo zebhodi yezitshixo zamanye amazwe ngaphezulu kweelwimi ezingama-50. Ungafikelela kwibhodi yezitshixo engalungiselelwanga isiNgesi saseMelika:
Cofa Useto → Ngokubanzi → Iikhibhodi → Iibhodi zakwamanye amazwe → Yongeza ikhibhodi eNtsha.
ibuprofen kunye neTylenol kunye
Ngenye indlela, cofa Useto → Ngokubanzi → Kwilizwe jikelele → Iikhibhodi → Yongeza ikhibhodi eNtsha.
Nokuba yeyiphi na indlela oyenza ngayo, pop up olu luhlu, olubandakanya ikhibhodi yesiko lesiRashiya, iSlovak, iSweden nezinye iilwimi. I-Apple ikwabonelela ngeenguqulelo ezimbini zesiPhuthukezi ukulungiselela abathengi eBrazil nasePortugal, kunye neenguqulelo ezintathu zesiFrentshi (kubandakanya neebhodi yezitshixo ezilungiselelwe abasebenzisi baseCanada naseSwitzerland). Heck, kukho nohlobo lwesiNgesi nolwimi lwasekunene njengesiArabhu nesiHebhere.
Cofa ukukhetha ikhibhodi.
I-motrin yabantwana ikhumbula i-2015
Ngaba unekhaya elisebenzisa iilwimi ezininzi? Unokukhetha, emva koko, njengeekhibhodi ezininzi zamanye amazwe njengoko ufuna.
Xa usebenza kwi-app ebiza ikhibhodi, cofa iqhosha lekhibhodi yamanye amazwe, phakathi kokutshintsha kunye nezitshixo zesithuba.
Iqhosha lesithuba libonisa okomzuzwana igama lolwimi lwekhibhodi, emva koko liguqulele igama isithuba ngokwayo kulwimi lwebhodi yezitshixo esetyenziswayo.
Cofa kwakhona ukukhetha ikhibhodi elandelayo kuluhlu lweekhibhodi zamanye amazwe ozivulileyo kwiiSetingi.
Ukuba uqhubeka uhamba ngebhayisikile, ekugqibeleni uza kubuyela kulwakhiwo lwesiNgesi santlandlolo.
Nantsi enye indlela yokubiza ikhibhodi oyenzileyo:
Cinezela umnwe wakho kwikhibhodi yezitshixo yamanye amazwe de iwindow pop-up ibonise zonke iibhodi ezingundoqo ezilungele ukusebenza.
Slayida umnwe wakho kuluhlu lude lufike kwibhodibhodi ofuna ukuyisebenzisa.
I-trazodone hydrochloride 100 mg
Khupha umnwe wakho ukuze ukhethe loo keyboard.
Ungasebenzisa ukuqondwa kwempawu yokubhala ngesandla ngesiTshayina esenziwe lula kunye nesintu, njengoko kubonisiwe kulo mzobo. Tsala nje umnwe wakho kwibhokisi ebonakala xa ukhetha isiTshayina - Esenziwe lula okanye isiTshayina-Esiqhelekileyo.
Iipakethe zomkhenkce ngenxa yomkhuhlane
Iziphumo zexesha elide ze-vyvanse
Isebenza njani i-reglan
I-furosemide 20 mg ithebhulethi
I-wort st john kunye ne-5 htp